Ciyaaraha lagu ciyaaro WhatsApp | Androidsis
daniplay | | Codsiyada Android, Whatsapp
Ciyaaraha loo maro WhatsApp -ka ayaa noqday moodo dhowr sano hadda. Kala duwanaanshahooda waxay ka dhigan tahay inaannaan ka caajisin markaan koox ku jirno, mararka qaarkood qaar badan oo ka mid ahi waxay muujiyaan aamusnaan weyn, wax wanaagsan ma leh maxaa yeelay waxay leeyihiin waxqabad yar, wax lagu xallin karo mid kasta oo ka mid ah soo jeedimaha halkan lagu muujiyey.
Haddii aad rabto inaad ogaato kuwa hadda isbeddelaya, waxaa ugu wanaagsan inaad tagto eegista liiska, mid kasta oo ka mid ah wuu ka duwan yahay waxayna muujinayaan madadaalo weyn. Ciyaaraha lagu ciyaari doono WhatsApp -ka 2021 -ka Waxa ugu muhiimsan waa kuwan soo socda, xusuusnow in mid waliba kala duwanaan karo iyadoo ku xiran gobolka.
1 Xariga su’aasha
2 Caqabadaha xisaabta
3 Laba ikhtiyaar
4 Runta ama ku dhiirran
5 Bal qiyaas filimka ama taxanaha
6 Loolanka 1 ilaa 9
7 Qiyaasta khaladka
8 Maxay yihiin odhaahyadan?
9 Soo hel jiirka
Waxay ahayd mid ka mid ah ciyaaraha loogu isticmaalka badan yahay kooxaha WhatsApp sanado badan. dadweynaha guud. Xiriiriyaha kooxda ayaa ku weydiiya su'aal kan ugu horreeya oo si sax ah uga jawaaba waa kan xiga si uu u diro su'aal cusub si ay uga jawaabaan xiriirada.
Ku habboon in la wada sameeyo cananaaska, marka lagu daro in maskaxda loo furo mid kasta oo ka mid ah xubnaha kooxda iyo ka qaybgalka si loo joogteeyo hawsha. Silsiladda su’aashu waxay ka bilaabmaysaa su’aal ka timi mid aan dhammaad lahayn, ugu yaraan ilaa laga helo waxqabad ka qaybgalayaasha oo dhan.
Waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah cayaaraha loogu isticmaalka badan yahay WhatsApp, ku habboon kuwa ku fiican tirooyinka oo aan ahayn xarafyo aad u badan. Lambarada emojis ayaa badanaa la adeegsadaa, iyagoo samaynaya saf toosan ama kor ilaa hoos, badiyaa waa ku -dhawaad ​​mar walba, laakiin sidoo kale isku dhufashada iyo kala -qaybsanaanta.
Marka laga reebo ciyaartaas, lambarka maqan ayaa sidoo kale la ciyaari karaaTusaale ahaan, haddii aad si toos ah u samayso waxaad arki kartaa lambarada lammaanaha ah oo dhig midka maqan. Caqabadaha xisaabta ayaa ah madadaalo iyo sidoo kale jimicsiyo lagu jimicsado maskaxda. Ku habboon dhammaan noocyada kooxaha.
Xaqiiqdii waad ogtahay, maadaama ay tahay midda ugu caansan marka aad ku ciyaareyso WhatsApp. Qofka masuulka ahi wuxuu ku siin doonaa laba ikhtiyaar oo kaliya oo ay tahay inaad ku doorato haa ama haa, ma mudna inaad maya tidhaahdo mid ka mid ah kuwa muuqda, mar haddii xeerarka ciyaarta aan la raacin.
Ku habboon jebinta barafka u dhexeeya dhammaan kuwa ku dhex milmay koox -koox, haddii aad samaysato kulan, u bax cabitaan, iyo waxyaabo kale. Tuur laba ikhtiyaar oo la fulin karo, ka dibna sug jawaabta ugu yaraan hal ama dhowr qof. Mid la kulan haddii aad rabto inaad ka qaybgasho oo aad ciyaarta gasho.
Runta ama ku dhiirran
Waa mid ka mid ah ciyaaraha xafladda caadiga ah ee saaxiibbada lala yeesho, sidoo kale ku habboon ciyaar ahaan inaad ku ciyaarto WhatsApp -ka, marka laga reebo inaad aad u xiiso badan tahay iyo sidoo kale ku habboon jebinta barafka. Waxay ku saabsan tahay run u sheegidda mid ka mid ah su'aalaha ay weydiiyeen saaxiibbadaa ama aqbalidda caqabadda ay ku siiyaan xilligaas.
Mawduuca waxaa go'aamiya dhammaan ka -qaybgalayaasha kooxda WhatsApp, sidaa darteed waxay noqon kartaa inta aad rabto maadaama ay jiraan kuwo badan oo la heli karo. Runta ama Dare waa, iyada oo ay weheliyaan kuwa kale, mid ka mid ah ka -qaybgalayaasha oo ku habboon haddii aad rabto inaad ballaariso mowduucyada si aysan had iyo jeer isku mid ahayn.
Bal qiyaas filimka ama taxanaha
Iyada oo loo marayo emojis waxaad u soo jeedin kartaa inaad ku qiyaasto filim ama taxane dhammaan ka -qaybgalayaasha kooxda, oo ay ku jiraan kuwa aan firfircoonayn maalin kasta. Marka la soo jeediyo kala duwanaansho, buugga labadoodaba waa la furi doonaa, maadaama ay jiraan noocyo badan, taxane iyo filimo labadaba.
Marka la isku daro emojisyadaas filimka ama taxanaha ayaa soo bixi doonaXusuusnow inaad tiraahdo haddii ay mid tahay ama mid kale, tan waxaad ku caawin doontaa dhammaan ka -qaybgalayaasha inay dhaqso u socdaan. Qiyaas filimka ama taxanaha waa mid ka mid ah cayaarahaas oo aan lagu seegi karin WhatsApp -ka maxaa yeelay waa dhakhso iyo madadaalo isku mar
Loolanka 1 ilaa 9
Ka dooro lambar 1 ilaa 9 oo u dir caqabad, waayo tan waa inaad si dhakhso leh uga jawaabtaa jawaabta kala duwan ee la heli karo. Qaar ka mid ah jawaabaha kala duwan waxaa ka mid ah kuwan soo socda: «igu qeex saddex sadar», «ila kulan taariikh», «i soo wac oo mar kale magacayga dheh», iyo kuwo kale.
Caqabada 1 ilaa 9 ayaa ku habboon haddii aad tahay qof la bilaabay ama kuwa kale ay sidoo kale yihiin, waa ciyaar toos ah oo loogu talagalay WhatsApp kaamil ah haddii aad jeceshahay qof. Jawaabaha ka sokow waxaad isticmaali kartaa su’aalo si aad toos ugu tagto qof oo aad u ogaato haddii aad dhowr su’aalood oo is xigxiga weydiiso.
Ciyaartan fudud waxay maskaxda dadka aad la xiriirto ka dhigi doontaa inay si adag u fikiraan, gaar ahaan adigoo qiyaasaya caqabadaha uu bilaabay qofka mas'uulka ah ama kan ugu weyn. Tusaale ahaan, waxaad dhigi kartaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 iyo 10, dhammaantood waa sax, markaa qaladku wuxuu ku jiri doonaa erayga «Next».
Waxaad eray dhex dhigi kartaa lambarada, laga yaabee inaad taas ku mashquulin doonto maskaxda qaar badan oo ku jira kooxda WhatsApp ee aad go'aansatay inaad dejiso. Waxaad ku samayn kartaa xarfo, tirooyin iyo weedh, ka saar shibbanayaasha ama shaqalada si aad ugu darto nooc khalad ah.
Maxay yihiin odhaahyadan?
Dhaqanku waa qayb aasaas u ah nolosheenaTaasi waa sababta ay u wanaagsan tahay inaad qayb ka mid ah la wadaagto dadka aad taqaanid mar kasta oo aad awooddo. Maahmaahda Isbaanishku waxay ku fiicnaan kartaa daqiiqado badan, gaar ahaan kuwa ay lagama maarmaanka u tahay inaad ku biiriso hadhuudh ciid ah kooxaha WhatsApp ee aad caadiyan la qabsato.
Sida kiiska filimada iyo taxanaha xiisaha leh, ciyaartan oo ku saleysan emojis waxaad awoodi doontaa inaad qorto odhaahyada aad jeceshahay inaad aad u xasuusato. Haddii tusaale ahaan aad geliso emoji afka, mid kale madaxa canine iyo kalluun, saddexdaan qiiro leh waxay leeyihiin macnaha "Kalluunku afka ayuu ku dhintaa."
Soo hel jiirka
Waxaa loo abuuray si loo helo jiir ka dhex jira xayawaan badan, qaar badan oo ka mid ah waxay la mid yihiin codka xayawaankan oo u qalma qoyska jiirka. Ku habboon sida ciyaaraha kale ee WhatsApp oo ah jimicsi maalinle ah oo ku habboon koritaanka maskaxda.
Waa mid ka mid ah ciyaaraha WhatsApp ee mobilada oo la cusbooneysiiyay waqti ka dib, si sax ah ugu habboon in lala ciyaaro kooxda aad ku jirto. Intaa waxaa dheer, qaar badan ayaa ah carruurta sida caadiga ah u ciyaara maxaa yeelay runtii waa balwad. Ma aha sida toddobada khalad, laakiin waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la fikiro oo, wax walba, in la isticmaalo aragga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Ciyaaraha lagu ciyaaro WhatsApp
5ta kulan ee ugu fiican Sonic ee Android